श्रीहर्षले खोले यो रहस्य, भारतकै इक्षाअनुसार बामपन्थीको सरकार गठनको तयारी भइरहेको खुलासा !
ARCHIVE, POLITICS » श्रीहर्षले खोले यो रहस्य, भारतकै इक्षाअनुसार बामपन्थीको सरकार गठनको तयारी भइरहेको खुलासा !
कोइरालाले कांग्रेसका नेताहरूलाई पाँच बर्षसम्म सत्तामा जान नदिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुवै बाम दललाई सरकारमा राखिराख्ने पनि उनले बताए । कोइरालाले दुवै दलका शीर्ष ओली र दाहाल सत्तामा आलोपालो बस्ने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको सल्लाह र स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने सहमति भएको दाबी गरे । कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने अनुसार र भनेको समयमा भन्दा फरक ढंगले संविधान जारी गर्न कांग्रेसले भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेसलाई सत्ताबाट बाहिर राखिराख्न मोदीको ठूलो भूमिका रहेको बताएका थिए । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।